Ubuciko nokuzijabulisa, Ukugembula
I-Spain yizwe laseYurophu lapho amakhasino asebenza ngokusemthethweni. Emadolobheni okuphumula phakathi kwamakholomu kanye nemigoqo ye-disco engekho-cha, futhi kuyoba nekhasino encane yokubaluleka kwendawo. Emadolobheni amakhulu noma emahoreni amakhulu amafashini kunamakhasino aseklasini - ngokukhanya okubalulekile kwezibani nokuzungezile okuzungezile. Kukhona ukukhetha.
Ngaphezu kwalokho, izivakashi zezwe zingasheshe zivakashele i-Nice noma i-Monaco, zivele zikhishwe ngamatshe. Izinkampani zokuhamba zize zinikeze i-Monte Carlo neNichambela ukuhambela izikhungo zokugembula cishe ama-euro angama-200-300, kanti ukuvakasha kunikwa ama-chips angu-20 ngomdlalo ngamunye. Isipho soMcebo, ngaphandle kwalokho!
I-Casino yokunethezeka kakhulu - iCasino de Madrid iphakathi nendawo yeMadrid futhi inesiko eside. Umdlali ovamile angangena kuwo ngokuqokwa kuphela, nganoma yisiphi isikhathi amalungu kuphela eqembu le-casino angase afike. Akukude neMadrid yiGrazil Casino kanye neGran Casino Aranjuez, eyaziwa kakhulu nge-cuisine enhle kakhulu yokudlela. Kunezinkinobho ezinkulu eCosta Brava, eCosta del Sol futhi, eqinisweni, eziqhingini: eyodwa eMallorca kanye nantathu kule Canary (Tenerife).
Iqoqo lokugembula eSpain lendabuko, ngokuvamile imidlalo yekhadi, i-roulette, i-slot machine kanye ne-craps. Izigxobo zivame ukuzungeze ama-euro angu-5, kepha kukhona namahholo amakhulu okubheja. Kukhona umshini we-slot nama-discotheques. Abantu bendawo bayithatha ngokuthula, futhi kubakhenti lokhu ibhonasi eyengeziwe, ikakhulukazi abaseRussia abangakwazi ukudlala kuphela casino ye-intanethi kwi-casino e-intanethi.
Emakhasini amakhulu kunemiqhudelwano ye-poker ye-European level. Kukhona amatafula ambalwa we-poker wezivakashi ezijwayelekile, kodwa akekho ozoshiywa phansi: othile uzonikezwa ukudlala etafuleni lamahala, omunye uzonikezwa ukudlala okunye okunye, ngokushintsha. I-croupier lapha inobungane kakhulu futhi iyaqonda.
Izimfuneko zokugqoka lapho uvakashela ikhasino ziyizintando zeningi, iningi lazo zigqoke izigqoko zokugqoka abesifazana kanye nesambatho somnumzane akudingekile, kodwa akusho lapha ngama-shorts and slippers. Abantu abangaphansi kweminyaka engu-18 ngeke bavunyelwe ukuvakashela ikhasino, bayodinga ipasipoti emnyango wabantu abasha. Umkhathi ukhululekile, naphezu kwalokhu, abaseYurophu baphatha ngokufanele, ngisho noma bephuza ngokweqile. Ngokuvamile, i-casino eSpain iyongezelela kakhulu ukuhamba nokuzilibazisa.
I-Best Lottery yase-USA
Isilinganiso sabakhaki eKazakhstan: i-BC engcono kakhulu
Ibhukibhu "Baltbet": ukubuyekezwa kwabadlali nabasebenzi
Iyini inzuzo - ibhokisi lwemali ye-investor novice
Game isikhwama - Iyini? Indlela yokwenza umdlalo-isikhwama ngezandla zakhe
Ukudla ephansi fat noma kilojoule ezingezinhle
Flying Moment. Digital Video Camera For Extreme ukudubula.
Kuyini izinga Ibhange ukhiye? Izinga ayisihluthulelo Central Bank of the Russian Federation
Lokho kuthiwa amazwe eBulgaria njengoba isikhumbuzo?